Filoha Marc Ravalomanana : ny TROIKA an'ny SADC no mikarakara ny fiverenany
Hanomboka hiverina handray ny asany eo anivon'ny rafitra tetezamita ireo ministra, sy ireo CT ary CST. Fanaporofoana ny fahavononan'ny filoha Ravalomanana ny amin'ny famaranana ny krizy haingana izany fanapahan-kevitra izany. "Tsy niova mihitsy aho amin'ny fitiavako an'i Madagasikara, ary vonona ny hifampiresaka hatrany hitsinjovako ny tombotsoa ambony ny firenena". Na teo aza ireo feo mifanipaka mikasika ilay fihaonana tany Maputo, dia nanamafy ny efa voalazany teny amin'ny Magro ny filoha. Manaiky ny tetiandro-pifidianana naroson'ny Ceni-t ny Sadc, manaiky ihany koa ny Sadc fa afaka milatsaka avokoa ny rehetra, ary ny vahoaka Malagasy no mametraka izay safidiny, satria tsy afaka ny handrara ny zo demokratika ny Sadc. Nohamafisin'ny Sadc ihany koa fa dia tsy maintsy tanterahina iray manontolo ny tondrozotra indrindra ny andininy faha 20. Nomen'ny filoha fahafahana manontany malalaka izay manitikitika azy ny mpanao gazety androany, mba hazahoan'ny vahoaka Malagasy ny vaovao marim-pototra rehetra mikasika ny famahana ny krizy.
Sary valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety
Call_on_the_SADC_and_the_AU_to_provide_effective_leadership_end_the_political_crisis_in_Madagascar.pdf 2.94 Mo